निजि वनमा वढ्दाे आकर्षण - Yohosamachar
पछिल्लो समय पारिवारिक निजी वनको बारेमा नीतिगत तहमा वहस र वन विस्तार तीव्र बनेको छ । निजी जग्गामा रुख र बहुउपयोगी बिरुवा रोप्ने क्रम बढेसँगै यसको विस्तार बढेको हो ।
मुलुकभर झण्डै १० लाखभन्दा बढी निजी वन रहेको पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन) ले जनाएको छ । पछिल्लो समय आम्दानीका लागि किसान परिवारको निजी जग्गामा रुख रोप्ने बढेका ।
‘किसानले बाँझो जमिनमा छिटो हुर्कने तथा धेरै आम्दानी प्राप्त विभिन्न प्रकारका बिरुवा लगाउन थालेका छन्,’। सन् २०१५ मा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत निजी वन बर्सेनि बढ्ने गरेको छ । निजी वन विस्तारले वातावरणीय रूपमा सकारात्मक प्रभावसँगै किसानले आर्थिक रूपमा पनि मुनाफा गरेका छन ।
वन तथा वातावरण सचिव डा. विश्वनाथ ओली लगायतको टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार मध्यपहाडी जिल्लाका पारिवारिक निजी वनले २२.८ प्रतिशत आर्थिक योगदान गरेका छन् ।
‘पश्चिम नेपालका जिल्लामा खाना पकाउने इन्धनको २० प्रतिशतसम्म पारिवारिक निजी वनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ,’ एफोनले वि.स. २०७५ को बैशाखमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेवदन अनुसार सन् २०१५ मा पारिवारिक निजी वन र निजी वनबाट साढे पाँच करोड क्युफिट काठ बजारमा आएको छ ।
निजी वनका नीतिगत, आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत चुनौती सम्बोधन हुन नसक्दा यसको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको एफोनका महासचिव सिग्देल बताउँछन् । ‘सरकारले पारिवारिक निजी वन विकासको नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवद्धता जनाए पनि यसमा चासो देखाएको छैन,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म आफ्नै दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्रै पारिवारिक निजी वनको संरक्षण र संवद्र्धन गरेको आम बुझाइ छ । तर, देशको अर्थतन्त्रका लागि समेत निजी वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन अझै सकिएको छैन ।
नयाँ संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पारिवारिक निजी वनको हुर्काइएका रुखमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु आफैमा अस्वभाविक छ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा पारिवारिक निजी वन किसानमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको निजी जग्गामा हुर्काइएका रुखमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुका साथै अन्य प्रजातिका रुखहरू काट्न र आधारभूत आवश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नीति नियमले पारिवारिक निजी वन किसानको अधिकार हनन भएको छ ।
उदाहरणका लागि आँप, कटहर, अम्बालगायत फल बेच्न वा उपभोग गर्न कसैलाई सोध्नुपर्दैन । तर, त्यसैको रुख कटान गर्नुप¥यो भने लामो झमेला र झन्झसहितको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो स्वामित्वमा हुर्काइएका रुख काटेबापत धेरै निजी वन किसानहरू जेलसमेत जानुपरेको छ ।
यी र यस्तै चुनौती सामना गर्दै पारिवारिक निजी वन किसानको हक अधिकार स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन पारिवारिक निजी वन संघले अनगिन्ती चुनौतीसँग लडिरहेको छ ।
परिवार र समुदायको आर्थिक विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको पारिवारिक निजी वन किसानले राज्यबाट अपेक्षित सहयोग र सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यी चुनौतीलाई संगठित रूपमा सामना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
हाल कूल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत (६५ हजार ८ सय ४८ वर्ग किलोमिटर) वन छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३९ वट तह वनरहित भएको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वन क्षेत्रलाई बहुसंख्यक जनताको प्रमुख स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार र वातावरणीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वन नीति तर्जुमा गरिएको छ । यससँगै संघले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउँदै पारिवारिक निजीको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छ ।
निजी वनको काठलगायत वन पैदावारको संकलन, कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा सिर्जना गरिएका विरोधाभाष, झन्झट, अव्यवहारिक व्यवस्था, अवरोध, अनुचित प्रतिबन्ध आदि अविलम्ब हटाई निजी वनको निरन्तर विकास गर्ने र वन पैदावारको नेपालभर निर्वाध ओसारपसार गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
निजी वनलाई वन उद्यममा जाने वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी काठको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न र विदेशी काठको आयात निरुत्साहनमा अविलम्ब पहल गर्न नीतिगत सुधारको पहल आवश्यक देखिन्छ ।
पारिवारिक निजी वनका गरिएको जडीबुटी, उत्पादित वन पैदावार र काठ दाउराको बजारीकरण गर्ने क्रममा सोको स्थानीय स्तरमा नै प्रमाणीकरण गर्न पाउने र सोको स्थानीय रूपमा नै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै पारिवारिक निजी वनमा पालिएका र पाल्न सकिने वन्यजन्तुको व्यावसायीकरणका लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्नेछ ।
जसले गर्दा पारिवारिक निजी वनलाई उपयुक्त हुने किसिमको असल संकलन अभ्यास र दिगो वन व्यवस्थापन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ ।
← छोरा वा छोरी पाउने तरिकाबारे वेदमा के छ ?
खेती सम्बन्धी सम्पूर्ण आधारभूत जानकारी →